Tallaabo wadajir ah oo ka dhan ah Dambiyada La Xiriirta Gawaarida Hawl-galka
Warqad furan oo loogu talagalay hoggaamiyeyaasha maxalliga ah, siyaasiyiinta, shaqaalaha dhalinyarada, xirfadlayaasha, jaamacadaha, adeegyada dadweynaha, dhalinyarada, dadweynaha iyo qof kasta oo doonaya in uu joojiyo dembiga jidka dariiqa.
Qof kastaa wuu ogyahay in dembiga mindi uu yahay dhibaato weyn wadanka oo dhan iyo degaankaba, gaar ahaan saameynta dhallinyarada.
Dhammaanteen waa inaynu wada-hawlgalnaa si aan ujeedo u-dhigno dambi-fal-dambiyeed oo ka yimaada magaaladeena. Waa lagama maarmaan in aan dhamaanteen ku xirnno, iyada oo horey ujirta, oo leh farriimo isku dhafan iyo waxqabadyo dhammeystiran.
Kooxdayada Element ayaa la shaqeyneysa la-hawlgalayaasheeda oo ay ka mid yihiin Bilayska Koonfurta Yorkshire iyo Sheffield Hallam si ay u sameeyaan baadhitaan hore ah aragtida dadka dhalinyarada ah ee leh mulkiida iyo dambiyada.
Dufcaddii ugu horeysay ee xogta iyo stats waa diyaar waana oo aan ku soo daray kuwan dhamaadka blogkan. Wadarta dhalinyarada 132 ee da'doodu tahay 16-17 ayaa la baadhay. Sahanku wuxuu daboolayaa dhamaan meelaha Sheffield. Waxaanu balaarineynaa cabbirka tusaalaha bilaha soo socda.
Waxaa jira qiyaastii 30 dhalinyarada (oo ay da'doodu tahay 16 ilaa 18) kuwaas oo doonaya in ay ku lug yeeshaan olole ka hortaga dembiga jilitaanka. Dhallinyaradaani waxay tijaabiyeen waxyaabo fiidiyow ah iyo fikradaha ololaha. Waxa kale oo aanu leenahay aqoon-is-weydaarsiga jijiga bilaashka ah ee dugsiyada iyo barayaasha kale ee Sheffield.
Waxaa jira wadahadallo kale oo badan oo ku saabsan jilitaanka mindida ee magaalada. Waxaan jeclaan lahayn inaan wadahadaladan wadajir u keenno si aan wax uga qabano waxtarka sida ugu macquulsan ee yareynaya saameynta degdegga ah ee dambiga jilitaanka iyo in la sameeyo qorshe wanaagsan oo mustaqbalka ah.
Saaxiibkay Will Will Earp (will.e@elementsociety.co.uk / 0114 2999 210) wuxuu wadashaqeynayaa wadashaqaynteenna nala wadaagayaasha hadda.
Fadlan nala xiriir haddii aad jeclaan laheyd inaad kaqaybqaadato wada hadal kooxeed, ama u imaato inaan naftayda la hadlo iyo Will.
Inaad xor u noqoto inaad bangiga ku soo gudbiso qofkasta oo aad aaminsan tahay inuu qayb ka yahay wadahadalka.
Horudhac * Natiijooyinka sahanka (n = 132) Dadka dhalinyarada ah ee la daraaseeyay:
90% dadka qaata mindi ayaa leh asxaab, kuwaas oo sidoo kale qaadanaya mindi
43% ee qaata mindi ayaa ku nool S6 ama S7
52% ee qaadatay mindi ayaa ah White British
73% waxay aaminsanyihiin in dadku ay qaataan mindiyo si ay u ilaaliyaan, dareemaan ammaan la'aan
16% waxay aaminsanyihiin in dadku ay qaataan mindiyo sababtoo ah waxqabadka baandooyinka la xiriira
15% waxay aaminsanyihiin in dadku ay qaataan mindiyo la xiriira sumcadda bulshada (iyagoo loo arko inay 'qabaan' asxaab.)
57% ka qaybgalayaashu waxay sheegeen in dambiga mindi uu dhaco sababtuna tahay waxqabadka la xidhiidha burcadda, ama isku dheelitirnaanta / iskahorimaadka u dhexeeya kooxaha
67% ee kuwa soo sheegey mindida, waxay ku jawaabeen in dadku ay qaataan mindiyo si ay u badbaadiyaan, iyo 63% ayaa ka jawaabay in dambiyada mindi ay dhacaan sababo la xiriira hawlaha baandooyinka la xiriira
(marka loo eego dhallinyaradu waxay dareemayaan inay tahay inay haystaan ​​mindi meelaha aagga la xiriira baandooyinka si ay u ilaaliyaan naftooda)
* Tani waa cilmi baaris joogto ah oo tirakoobyadan waxaa laga soo qaatay tusaalihii koowaad ee dhalinyarada 132, laga soo bilaabo Sheffield, da'da 16-17, waxay soo aruurisay Julaay iyo Agoosto 2018.